सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार - जहाँ पाठकहरूको आवाज छ
सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
कसरी जीबी इन्स्टाग्राम APK डाउनलोड गर्ने
वाल्टर रिचर्ड्स मार्च 5, 2021 मार्च 4, 2021 वाल्टर रिचर्ड्स
इन्स्टाग्राम जीबी आधिकारिक इन्स्टाग्राम अनुप्रयोगको परिमार्जन गरिएको संस्करण हो जहाँ प्रयोगकर्ताहरूलाई थप फाइदा र अनुप्रयोगमा राम्रो नियन्त्रण दिनको लागि धेरै परिवर्तनहरू गरिएको छ। जहाँसम्म आधिकारिक संस्करणको कुरा छ, त्यहाँ केही कमिहरू छन् जसले प्रयोगकर्ताको अनुभवलाई बिगार्दछ। ती कमतराहरू हटाइन्छ, र थप ...
कसरी एक प्रभावी वैश्विक व्यापार रणनीति बनाउने
सबा Seo मार्च 5, 2021 मार्च 4, 2021 सबा Seo
तपाईंको व्यावसायलाई विश्वव्यापी बनाउँदा त्यहाँ ठूलो सम्भावना हुन्छ, तर तपाईंलाई रणनीति चाहिन्छ। संयुक्त राज्यमा, विश्वको कुल आम्दानीको २० प्रतिशत भन्दा बढी उत्पादन हुन्छ। धेरै वित्तीय प्रवाह अमेरिकाबाट आउँदा, यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रणनीति थाहा हुनु महत्त्वपूर्ण छ ताकि तपाईंको कम्पनी सफल हुन सक्दछ। अधिक जानकारीको खोजीमा उनीहरूको लागि जाँच गर्नुहोस् ...
व्यापारका लागि द्रुत मास्टर सोशल मीडियाको लागि5सुझावहरू
सम्पादकको पिक रेबेका रोजर्स मार्च 5, 2021 मार्च 4, 2021 रेबेका रोजर्स
सामाजिक मिडिया मार्केट प्लेटफार्मको उपयोग गर्दै हामी सबैलाई थाहा छ कि सोशल मिडिया एक प्लेटफर्म हो जहाँ तपाईं विश्वभरका व्यक्तिहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। यसैले एक व्यवसाय बिन्दुबाट, यो एक ग्लोबल बजार संग तुलना गर्न सकिन्छ, एक उद्यमी को रूप मा, तपाईं एक टाढा बाट विश्व मार्फत आफ्नो उत्पादन बजार गर्न सक्नुहुन्छ ...
कर समय गाइड - आर्थिक प्रभाव भुक्तानी प्राप्त गरेन? रिकभरी रिबेट क्रेडिटको लागि योग्यता जाँच गर्नुहोस्
सम्पादकको पिक फिल्ममेना मेले मार्च 5, 2021 मार्च 3, 2021 फिल्ममेना मेले
आन्तरिक राजस्व सेवाले पहिलो पटकका फाईलहरू र उनीहरूसँग जसलाई सामान्यतया २०२० कर फिर्ताको फाइलिंगमा विचार गर्न संघीय फाइलिंग आवश्यकता छैन भनेर सम्झाउछ। तिनीहरू रिकभरी रिबेट क्रेडिट, एक नयाँ फिर्ती योग्य क्रेडिट, कोरोनाभाइरस सहायता, राहत, र आर्थिक सुरक्षा (CARES) ऐन र COVID- सम्बन्धित कर राहत अधिनियम द्वारा अधिकृत गर्न योग्य हुन सक्छन्।
अनुसन्धान रिपोर्ट खरीद गर्नुहोस्: टेनिस रैकेट मार्केट २० 1.5० को लगभग १.० X विस्तार गर्न - COVID-१ Out आउटब्रेकलाई असर गर्ने बिक्री सम्भावनाहरूको कारण कम खेल गतिविधिहरू।
म तपाईंलाई मेगा प्याक WP प्लगइन दिन्छु
अनुसन्धान रिपोर्ट खरीद गर्नुहोस्: भारतीय पान मसाला बजार ग्रोथ उत्पाद विविधताद्वारा प्रभावित
इजरायलको चुनाव तीन हप्तामा - इरानले मध्य पूर्वी सामान्यीकरणलाई खतरा ठान्दछ
इजरायलको चुनाव तीन हप्तामा आइपुगेको छ। बेन्जामिन नेतान्याहू देशलाई खोप दिन सफल भएकोमा भर पर्दैछन जसले अस्पताललाई भर्ना गराउने संख्या १ हजारदेखि 700०० लाई तल ल्याएको छ।
तान्या वार्ड जोर्डन
हाम्रा नागरिकहरूलाई अझ राम्ररी जोगाउन हामीले संघीय कामदारहरूलाई बदला लिनुपर्दछ। तिनीहरू घरेलु आतंकवाद विरुद्ध देशको रक्षा को पहिलो लाइन को रूप मा सेवा। स federal्घीय कार्यस्थलले प्रतिकार विना नागरिक कर्मचारीहरूलाई सक्षम गर्दछ (जस्तै…
डोले points points points बिन्दु वा ०.%% तल, 31440१95० बिन्दु रिपोर्ट गरेको थियो। पहिले, गिरावट १ points० अंकमा पुग्यो, र यो अस्थायी रूपमा 0.3१,140, points बिन्दुमा कम थियो। S&P 31,395 सूचकांक हाल 500 3879 points बिन्दुमा रिपोर्ट गरिएको छ,…
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का महानिर्देशकको रूपमा सोमबार आफ्नो पहिलो भाषणको क्रममा नाइजेरियाका शीर्ष अर्थशास्त्री नोगोजी ओकोन्जो-इवलालाले विश्वस्त गराए कि संस्थाले जस्तो काम गर्न जारी रहन सक्दैन।
संयुक्त राज्य र युरोपियन युनियनले संयुक्त रूसी सरकारी अधिकारीहरू विरुद्ध मंगलबार संयुक्त रुपमा घोषणा गर्‍यो विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनीको मुद्दामा जो जनवरी मास्को मास्को आइपुगेपछि पक्राउ परेका थिए र जेलमा परेका थिए…
संयुक्त राज्यको कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बन्धी राष्ट्रिय सुरक्षा आयोग (एनएससीएआई) ले कांग्रेसलाई चिप उत्पादन टेक्नोलोजी टेकनलाई कडा बनाउने सिफारिश गरेको छ कि आगामी केही वर्षमा चीनलाई उछिन्न रोक्न। एनएससीएआईले चीनको सीमित सल्लाह दिन्छ ...
अमेरिकी bondणपत्र ब्याज दर उनीहरूको उच्चबाट गिरावट आएको छ, बजार प्रतिस्पर्धाको मुद्रास्फीति को बारे मा चिन्ता कम, र डो ड्राइभ more०० भन्दा बढि अंकहरु को लागी ड्राइभ। डो 600१,31,543 points अंकमा, closed११ बिन्दुहरू माथि, वा…
पहिलो दिन इन-होम ट्यूटर भएर चेनले मात्र स्तब्ध महसुस गरे। त्यस बेला उहाँ बेइजि inको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा चिनियाँ साहित्यमा प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उनले एक Wechat समूहमा सन्देशको खाँचोमा परेको देख्नुभयो ...
१ 15 बर्ष भन्दा बढीको याचिका र चुनावको केवल तीन हप्ता पछि, इजरायलको उच्च न्यायालयले इजरायलमा सुधारवादी र परम्परावादी धर्म परिवर्तन गरेर यहूदी धर्ममा परिणत हुनेहरू निर्णय गर्ने निर्णय गरे।
चिनियाँ सरकारले अलीबाबा समूहको गरीबी उन्मूलन नीतिलाई समर्थन गरेकोमा त्यसको प्रशंसा गरेको छ। किनभने फर्मले किसानहरूलाई यसको प्लेटफर्महरू मार्फत १$० अरब डलरभन्दा बढीको फार्म उत्पादन बेच्न मद्दत गरेको छ। यसको कारणले ...
Bitcoin, भर्चुअल मुद्राको मूल्य घट्दो छ। पछिल्लो २ hours घण्टामा, यो 24.२6.28% ले घटेर $ ,१,१ $ को कममा झरेको छ। Coindesk उद्धरण डाटाका अनुसार, Bitcoin थियो…
कारागारमा बन्दी बनाइएकी जेलका जोआकिन 'एल चापो' गुज्मानकी पत्नी एमा कोरोनेल आइसपुरोलाई अमेरिकी अधिकारीहरूले लागूऔषध तस्करी योजनामा ​​संलग्न रहेकोमा संघीय अनुसन्धान पछि पक्राउ गरेको छ। दायर अभियोग अनुसार, उनी…
बर्मामा सत्ता कब्जा गर्ने सेनाले प्रजातान्त्रिक शासनको पुनःस्थापनाको माग गर्दै नागरिकहरूसँग फेब्रुअरीको पहिलो दिनदेखि देखिएका प्रदर्शनहरूलाई रोक्दै छ। सुरक्षा बलहरू प्रयोग गर्न थाले ...
अलेक्सी नवलनी आइतवार आइपुगेका थिए जुन मस्कोको २०० किलोमिटर पूर्वमा एक जेलमा भर्ना हुनका लागि हो जहाँ उनले आफ्नो सजाय भोग्नुपर्नेछ। मस्कोको सार्वजनिक निगरानी आयोगले एक विज्ञप्तिमा भने कि अलेक्सी…
आर्मेनियामा तनाव बढ्दै गयो। यस हप्ता मानिसहरू सडकमा उत्रेका थिए र धेरैले प्रधानमन्त्री निकोल पशियननले राजीनामा गर्नुपर्ने माग गरे। आर्मेनियामा सैन्य कुपनको सम्भावना छ। पहिले ...
इजरायली – प्यालेस्तिनी द्वन्द्व भनेको इजरायलीहरू र प्यालेस्टाइनहरूबीचको निरन्तर संघर्ष हो जुन २० औं शताब्दीको मध्यतिर अधिक विशाल अरब – इजरायली द्वन्द्वको बीचमा शुरू भयो। ... को भागको रूपमा विवाद समाधान गर्न विभिन्न प्रयासहरू गरिएको छ।
जो बिडेन प्रशासन अमेरिका र साउदी अरेबियाबीचको सम्झौताको समीक्षा गर्ने योजनामा ​​छ। वास्तवमा, फेब्रुअरी २th मा, बिडेनले भने कि अमेरिकाको सम्बन्धमा सोमबार आउँदैछ एक नयाँ घोषणा -
मिन्स्क वार्ताको परिणाम युद्ध हुनेछ। यस हप्ता डोनबास क्षेत्रको अवस्था बिग्रियो। मिन्स्क प्रोटोकोल डोनबास र युक्रेनको बीचमा भएको खुला टकराव रोक्नको लागि अनिवार्य रूपमा एक उपकरण हो। जे होस्, ...
रूसी सेनाले इलेक्ट्रोनिक युद्ध प्रणालीको लागि एन्टिदोटमा काम गरिरहेको छ। रुसी रक्षा विज्ञहरूका अनुसार प्रविधि एक प्रकारको एक हो र यसैले रूसमा मात्र त्यस्तो छ। त्यस पछि…
मेरो ल्यापटपमा कुन ब्याट्री छ भनेर पत्ता लगाउने?
सारांश: ब्याट्री मेरो ल्यापटपमा कस्तो छ भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगाउने? एउटा ल्यापटप कम्प्युटर ब्याट्री दुईदेखि चार बर्ष वा अन्तिम १,००० पूर्ण चार्जहरूको बीचमा हुनुपर्दछ। र त्यसो भए तपाईले आफ्नो पुरानो ब्याट्री बदल्नु पर्छ, त्यसो कसरी ...
यहाँ छ किन मानिसहरू पहिलो पटक कर दाखिल गर्छन् निःशुल्क फाईल प्रयोग गर्नु पर्छ
धेरै व्यक्तिले यस बर्ष पहिलो पटक संघीय करहरू भर्ने छन्। यी करदाताहरूका लागि, आईआरएस नि: शुल्क फाइल एक उत्तम विकल्प हो, विशेष गरी यदि तिनीहरू कर तयारीमा पैसा बचत गर्न खोजिरहेका छन्। फाईल गर्दै ...
२०२० संसारका धेरै परिवर्तनहरूका साथ धेरैका लागि लामो वर्ष थियो, जसमध्ये केही राम्रो र केही खराब थिए। एक परिवर्तन जुन राम्रो निर्भर गर्न सक्थ्यो…
Rock२ कुराहरु मैले रक बोटममा सिके
सम्पादकको पिकग्रेग हुड
म हतारमा तातो दक्षिणी गर्मीमा ब्यूँझदा, म व्याकुल छु। मलाई शान्तिको अनुभूति छैन। म किन पक्का छैन। मसँग सधैं शान्तिको अनुभूति हुन्छ। सबैभन्दा खराब के हो यो म पनि छैन ...
किन व्यवसायहरूको डिजिटल मार्केटिंग मन्टर हुनु पर्छ?
सम्पादकको पिकटिम स्टोक्स - व्यापार संरक्षक
धेरै व्यवसायहरू मार्केटिंगमा एकमुष्ठ रकम लगानी गर्न हिचकिचाउँदैनन्, तर विरलै मार्केटिंगमा शिक्षा तिर्ने विचार गर्छन्। यो जहाँ एक अनुभवी डिजिटल मार्केटिंग सल्लाहकार ठीक ट्यूनिंग मार्केटिंग र रूपान्तरित लीड्स मा मद्दत गर्दछ ...
सबैजना निकै कलिलो उमेरमा सफल हुँदैन किनकि व्यक्तिहरूमा सटीकता, अनुभव र उचित समझको कमी हुन्छ। यद्यपि, अहाद खलीक डिजिटल मार्केटिंगको क्षेत्रमा एक उत्तम रूपमा देखा परेको छ। ऊ ...
यद्यपि मोबाइल अनुप्रयोगहरू, एआई, र वीआरले आँधीबेहरीले भर्चुअल शिक्षा लिएको छ, भिडियो अझै पनि यसको स्नायु केन्द्र हो। अब, याद गर्नुहोस् कि भिडियो सम्पादन काम मात्र आधा भयो। तपाईंले पहिले उत्पादन गर्नु पर्छ ...
सम्पादकको पिकडेभिड वेक्सलम्यान
गुरु जनार्दन एकै समयमा अमेरिकाको यात्रा गरे जब त्यहाँ वुडस्टकमा एउटा चाड थियो। १ 1969 XNUMX in मा वुडस्टॉक फेस्टिवलको बेला उनी शिकागोमा अजापा योग सिक्नको लागि व्यक्तिहरू लिएर आएका थिए। चरमोत्कर्ष ...
कुनै चुनौतीको लागि चुनौतीपूर्ण अझै महत्त्वपूर्ण चीज भनेको बिक्री हो। तपाईंको पेशाको रूपमा बिक्री छनौट गर्न जटिल हुन सक्छ किनभने त्यहाँ बिक्रीलाई सम्बन्धी सुझावहरू छन् र कुनै खास परिदृश्यमा के तकनीकहरूले काम गर्छन्। अझै, ...
त्यहाँ सेमीकन्डक्टर र वायु यातायात र मोटर वाहन उद्योग जस्ता सम्बन्धित क्षेत्रहरू सहित इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगको विभिन्न क्षेत्रमा टेक्नोलोजिकल प्रगति को गति बीच एक अतुलनीय भिन्नता छ। को वर्तमान दर ...
पुरानो घाउको हेरचाहमा, फेलोशिप प्रोग्रामहरू र अन्य शैक्षिक अभ्यासहरूले चिकित्सकहरूलाई बढ्दो क्षेत्र भित्र निरन्तर विकसित हुने उपचार र जानकारीको साथ राख्न मद्दत गर्दछ। सामान्य घाउहरू जस्तो नभई, पुराना घाउहरूले पूर्वानुमान पाठ्यक्रम अनुसरण गर्दैन ...
नोटबुकका मालिकहरूले धेरै गुनासोहरू पाए जुन उनीहरूको भर्खरै खरीद गरिएको नोटबुकको ब्याट्री जीवन द्रुत रूपमा खराब हुँदै गयो भनेर पत्ता लगाइयो। ब्याट्री जीवन% 35% ड्रप हुन्छ केवल केही महिना पछि…
सोमबार, नयाँ कोरोनाभाइरस लकडाउन यहाँ सिन्ट्रो काउन्टी, ओन्टारियोमा शुरू भयो। स्कूलबाट परम्परागत मार्च ब्रेक अप्रिलमा सारिएको छ। तसर्थ, बाहिर भोजन विकल्प छैन। टेकआउट र खाना वितरण ...
सम्पादकको पिकमिगुएल टोरनेर
विकासोन्मुख समुदाय र गरिब क्षेत्रको सुधारको सवालमा चर्चले अग्रपंक्तिमा काम गर्दछ। गरिबहरूको लागि समर्थन र हेरचाहको लामो-आयोजित विरासतलाई "रोबिन हूड" को उपाधि मिल्यो…
भगवानले संसारलाई शासन गर्नुहुन्छ। भगवानले सत्यमा सम्झौता गर्नुहुन्न। सत्य भनेको ईश्वरको नाम हो। शान्तिको अर्को नाम हो। हरेक दिन परमेश्वर आफ्नो नम्रता प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। नम्रता मा भगवान को दिनुभयो ...
सम्पादकको पिकDmytro Spilka
पाँच मिनेटमा बिजुली सवारी चार्ज गर्न सक्ने ब्याट्रीहरू पहिलो पटक फ्याक्ट्रीमा उत्पादन गरियो। के यो प्राविधिक लीपले जन ईभ दत्तकको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्दछ? इलेक्ट्रिक वाहनहरु ...
सम्पादकको पिकफिल्ममेना मेले
नि: शुल्क संघीय कर तयारीका लागि सक्रिय शुल्क सैन्य कर्मचारीहरूको धेरै विकल्पहरू छन्। एउटा IRS नि: शुल्क फाइल हो। यस कार्यक्रमले अनलाइन कर तयारी, इलेक्ट्रोनिक दाखिल र फिर्ता को प्रत्यक्ष जम्मा प्रदान गर्दछ, कुनै मूल्य बिना। सेनाका सदस्यहरू ...
आन्तरिक राजस्व सेवाले करदाताहरूलाई ध्यानपूर्वक कर फिर्ताको तयारी गर्ने छनौट गर्न सम्झाउछ। जहाँसम्म कर फिर्ताको तयारीकर्ताहरूको विशाल बहुमतले इमान्दार, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दछ, केहिले ठगी, पहिचान चोरीको माध्यमबाट ठूलो नोक्सान पुर्‍याउँछ ...